I-Platitserium, noma "izimpondo ze-reindeer" - izimbali ezihlobisa ngamandla omlingo
Uma ukholelwa emandleni omlingo wezitshalo, khona-ke ngeke kube nesithakazelo kuwe ukwazi ukuthi i-placerium (kubantu "izimpondo zezilwane") izimbali-abenzi bokuthula. Amagumbi abo ekamelweni lawo anika abanikazi babo amandla amnandi, Ngokuhle futhi kuthonya kahle ukuxazululwa kwezimo ezingqubuzanayo, yakha isimo sokuthula nokuthula endlini. I-platitserium iyi-fern exotic. Ekuqaleni kusuka eBrazil ekude, lesi sitshalo se-epiphytic esendle siphila emagodini namagatsha ezihlahla. Ubani owake wabona i-platitserium esitolo sembali, uhlala ehlaba umxhwele ngokuphila, ngoba le fern liyamane likhangele ukubukeka kwalo nobukhulu balo. Ngemuva kwalokho, phakathi kwezindlu zokulala azikho izifanekiselo!
"Yini engavamile ngalesi sitshalo?", Ucela. Imbali ye-"anter antler", isithombe sakhe esingaphambi kwakho, sidonsela abathandi be-flora ngamagatsha alo, amaqabunga aluhlaza-ama-green-wiamis. Lezi ziqabunga zesikhumba-izikhukhumezi ngezinye izikhathi zingafinyelela ubude bomitha. Lesi sitshalo sinomhlobo ohlukile wamaqabunga - amancane, asundu futhi enza uhlobo "lwephaketheni", lapho imbali idonsela izakhi futhi iqoqwe Umswakama.
Platitserium, noma "izimpondo zezinyamazane" - izimbali zamahlathi ashisayo. Ngakho-ke, umoya ophezulu umswakama nokushisa okuphakathi kuka -14 ... +20 degrees yizimo eziyinhloko zokukhulisa i-epiphyte ekhaya. Lesi sitshalo sikhuthazelela ukukhanya okuhle, kodwa okukhethwa kukho okuhle - i-penumbra. Indawo engcono kunazo zonke endlini yakhe kuyoba yindwangu yefasitela, kodwa hhayi ngakwesokunene kwendlu. Yiqiniso, kunconywa ukuthi ususe imbali kusuka emiceleni, ngoba umhlobiso wayo oyinhloko - amaqabunga - uqala ukuphuzi. Faka lesi sitshalo kangcono ebhasikidi noma embizeni bese uhlala esimweni esimisiwe.
Izimbali zasekhaya "izimpondo zenyama" zilula kakhulu ukulima. Bakhetha i-substratum elula ngendlela yama- sphagnum moss nezicucu zamagxolo ezichotshoziwe. Ingxenye yezimpande ze-platitserium iqondiswe ephaketheni elisekelweni, okuvela kuwo amaminerali namanzi adingekayo ekukhuleni. Amaqabunga ahlambulukile, okukhumbuza izimpondo zezilwane (okwakuvezwa kuyo igama lawo lesibili), ungapenda, isibonelo, iphaneli elikhulu noma isithombe esodongeni, udala ukwakheka okuyingqayizivele.
Ukuze uthole amaqabunga amaningi okuhlobisa, udinga ukuchelela okulungile nokufika ngesikhathi. Awukwazi ukuvumela ukomiswa kwe-coma yomhlaba, kodwa inhlabathi ayidingi ukuba ibe ngamanzi, ngoba "izimpondo zezilwane" ziyizimbali ezibucayi. Ukunisela kufanele kube okulinganayo. Esikhathini esishisayo, kuhle ukucwilisa lesi sitshalo emanzini athambile (okwesikhashana) noma uyifake nsuku zonke ngamanzi ekamelweni lokushisa. Ezinsukwini ezibandayo, ukuchelela kufanele kuncishiswe, futhi ukufafaza kufanele kukhanseliwe ngokuphelele.
"Izimpondo zezinyamazane" ziyizimbali ezingathandeki, kodwa zingathinteka yizinambuzane, isibonelo, i-thrips, isicabucabu nesigwegwe, esihlala ngaphakathi kwamacembe. Izifo ezihlukahlukene ze-epiphytic zenzeka ngokuyinhloko ngenxa yokungalungi ekunakekeleni.
Ama-platycerium ayanda nge-cuttings - amahlumela aso. Njengoba lokhu kuyisitshalo se-fern, ama-spores akha emaqabunga, kodwa sekudla isikhathi sokukhiqiza "izimpondo zezilwane" ngosizo lokuphikisana. Amahlumela asetshenzisiwe aphethwe ngommese okhalile futhi atshalwe enhlabathini enomswakama ukuze kutholakale inhlanzi. Ukunamathela emithethweni eyisisekelo yokulimala lezi-epiphyte eziyimfihlakalo, umuntu angase ajabulele ukubukeka kwawo okunempilo isikhathi eside futhi angakhathazeki ngomonakalo wezilokazane.
Rose Pomponella - Ukunakekela
Isitoreji se Cannes ebusika: amathiphu kubalimi abanolwazi
I-Beetroot Pablo F1: ukubuyekezwa, izithombe, izici zebanga, ama-pluses, amaminithi nokubuyekezwa
I-Ribbon Ephuzi (Thuya): incazelo, ukutshala, ukunakekelwa
Scotch whiskey "Cutty Sark", umlando walo, incazelo, isithombe
Amakhandlela Bheka "Anuzol": ukubuyekezwa. "Anuzol": Umhlahlandlela intengo
Comedy "Uhlale ezintathu impohlo." Abadlali of the ifilimu "Uma ezintathu impohlo"
Indlela ukuvuselela umshayeli ukuba "windose 7"
Oxides Amphoteric. izakhiwo Chemical, inqubo wokulungiselela
Basel (Switzerland) - komunye wemizi enkulu yaseYurophu
Semolina e multivarka "Redmond": izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka yenqubo ukupheka
Inkukhu sikadali nge isobho - iresiphi elula